Shock Absorber အတွက် Powder Metal Sintered Part base valve
ပစ္စတင်နှင့်အောက်ခြေအဆို့ရှင်သည် အဓိကအားဖြင့် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာအတွက် စိုစွတ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ တံကျင်လမ်းညွှန်သည် ပစ္စတင်တံ၏ရွေ့လျားမှုအတွက် အဓိကလမ်းညွှန်ပေးသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်- အမှုန့် ရောစပ်ခြင်း – ဖွဲ့စည်းခြင်း – ဆီထုတ်ခြင်း – သန့်ရှင်းခြင်း – ရေနွေးငွေ့ ကုသခြင်း – ကွေးညွှတ်နှိပ်ပေးခြင်း – ပုံပန်းသဏ္ဍာန် စစ်ဆေးခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း
ရောစပ်အမှုန့်- အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန် သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော ဆန်ခါဖြင့် Fe – C – Cu အမှုန့်၊ အလိုအလျောက် ရောစပ်စက် 360° ဖြင့်4နာရီထက်ပို၍ လှည့်ပတ်ကာ ပစ္စည်းကို အညီအမျှ ရောမွှေပေးပါ။
ပုံသွင်းခြင်း- နှိပ်ပြီးနောက် အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ သိပ်သည်းဆကို သေချာစေရန် အလိုအလျောက် CNC ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် တိကျသောမှိုကို နှိပ်ပါ။
Sintering- ထုတ်ကုန်အား နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ထုတ်ကုန်များ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိနှင့် မာကျောမှုကို သေချာစေသည့် ပိုက်ကွန်အမျိုးအစား sintering မီးဖိုဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ဆီနှစ်မြှုပ်ခြင်း- ဆီသည် ထုတ်ကုန်၏ ချွေးပေါက်များအတွင်းသို့ အပြည့်အဝစိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး နောက်ပိုင်းစက်ဝန်း၏ သံချေးမတက်စေရန် ထုတ်ကုန်ကို ဖိအားမြင့်အိုးထဲတွင် ထားလိုက်ပါ။
ပလပ်စတစ်- အလိုအလျောက် CNC ဟိုက်ဒရောလစ် စာနယ်ဇင်း အပြည့်ဖြင့် တိကျသောမှို၊ နှိပ်ပြီးနောက် ထုတ်ကုန်သိပ်သည်းမှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပိုမိုတိုးတက်စေပြီး ပုံ၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
Machining- ထုတ်ကုန်၏ အပေါက်၊ groove နှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အပြီးသတ်ပါ။
သန့်ရှင်းရေး- အညစ်အကြေးများနှင့် သံဖိုင်များကိုဖယ်ရှားရန် ကွက်ကြိုးပတ်သည် ultrasonic သန့်ရှင်းရေးစက်ကို လက်ခံပါသည်။
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ကုသခြင်း- ထုတ်ကုန်ကို လျှပ်စစ်မီးဖိုအတွင်း ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ကုသပြီး ထုတ်ကုန်၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကာ မျက်နှာပြင် ဓာတ်တိုးအလွှာသည် သံချေးမတက်အောင် ကူညီပေးပါသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်း- ပစ္စတင်အား PTFE ချောဆီခါးပတ်ကို အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ဂဏန်းထိန်းချုပ်စက်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။
Press bushing- DU bushing တွင် ဖိထားသည်။
ထုတ်ကုန်အမည် Shock Absorber အတွက် Powder Metal Sintered Part
ပစ္စည်း (MPIF 35) FC-0205 (DIN 30910-4) Sint C10, Fe, Balance, Cu 1.5-3.9%, C 0.3-0.6%
သိပ်သည်းဆ ရေနွေးငွေ့ဓာတ်တိုးပြီးနောက် 6.4-6.9 g/cm3
မာကျောခြင်း။ 60-115 HRB၊ 1 kN တင်နေသည်၊ ဘောလုံး၏ အချင်း 1/16"
မျက်နှာပြင်ကုသမှု ရေနွေးငွေ့ဓာတ်တိုးမှု၊2နာရီ၊ Fe3O4: 0.004-0.005mm၊ ဓာတ်တိုးမှုဒီဂရီ 2-4%
သတ်မှတ်မထားသော စာနာထောက်ထားမှု ISO 2768 – m / H14၊ h14၊ +- IT14/2
ရုပ်ရည် ပြိုကျခြင်း၊ အက်ကွဲခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပျက်ပြယ်သွားခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းခြင်း၊ သတ္တုစပ်ခြင်း နှင့် အခြားချို့ယွင်းချက်များ မရှိပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှု အမှုန့်ရောစပ်ခြင်း - ပေါင်းခြင်း - ဆီသတ်ခြင်း - ဆီလိမ်းခြင်း - အရွယ်အစား -
Ultrasonic သန့်ရှင်းရေး - ရေနွေးငွေ့ဓာတ်တိုးခြင်း - အဆီဖုံးခြင်း - နောက်ဆုံး
စစ်ဆေးခြင်း - (+ DP4 bushing / +PTFE တီးဝိုင်း) ထုပ်ပိုးခြင်း။
လျှောက်လွှာ မော်တော်ကား၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် စက်ဘီးများအတွက် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ အားသာချက်များ- 1. လက်ရှိမှို 3000 ကျော်၊ သင်၏မှိုကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာပါ။
2. ISO/TS 16949:2009 လက်မှတ်
3. Competitive စျေးနှုန်း
4. APQP၊ FEMA၊ MSA၊ PPAP၊ SPC ၏ အရည်အသွေးကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မှု
ယခင်- အရည်အသွေး အာမခံဖြင့် Suspension အစိတ်အပိုင်းများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။
နောက်တစ်ခု: Shock Absorber အတွက် ODM သတ္တုတံဆိပ်တုံးအပိုင်း ကွင်းစပရိန်ထိုင်ခုံ
2039810020 အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ Shock Absorber Bearing အတွက်...
ODM Metal Stamping Part bracket spring seat for...